Porn အသုံးပြုမှုအကြောင်းကောက်နုတ်ချက်များနှင့်အင်တာနက်စွဲလေ့လာခြင်း -
compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းခန့်မှန်း: ဒါဟာအားလုံးလိင်အကြောင်းပဲ! (2006)
Meerkerk GJ, ဗန် Den Eijnden RJ, Garretsen HF ။
Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2006 ဖေဖော်ဝါရီ;9(1): 95-103 ။
ဤသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ပါဝါအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့သည် compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (CIU) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အမျိုးမျိုးသော Internet application များ။ အဆိုပါလေ့လာမှု 1 တစ်နှစ်တစ်ခုကြားကာလနှင့်အတူတစ်ဦး Two-လှိုင်း longitudinal ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။
cross-section အခြေခံတွင်, ဂိမ်းနှင့် erotica CIU နှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးဆုံး Internet application များပုံရသည်။ တစ်ဦး longitudinal အခြေခံတွင်, erotica အပေါ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းအကြာတွင် CIU 1 နှစ်တွင်တိုးခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ Tသူကကွဲပြားခြားနားသည်မတူညီသော applications များ၏အလားအလာ addictive; erotica အမြင့်ဆုံးအလားအလာရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအကဲခတ်: အင်တာနက်ကိုလိင်ဆိုဒ်များအလွန်အကျွံ (2011) အသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ Ratings အဖွဲ့နှင့်စိတ်ဓာတ်-စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းက္ပ
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2011 Jun;14(6):371-7. doi: 10.1089/cyber.2010.0222.
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (IAT) နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက် IAT တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်း (IATsex) အဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရှုထောငျ့တိုင်းတာခြင်းအများအပြားထပ်မံမေးခွန်းကိုလည်းသင်တန်းသားများကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုများကခန့်မှန်းခြင်း, နေ့စဉ်အသက်တာ၌အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ခြင်းလာသောအခါလိင် applications များ၏နံပါတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကြောင်းညွှန်ပြ အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ်) ရက်နေ့တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့နေစဉ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောငျ့သိသိသာသာ IATsex ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းမ.
ဘာစွဲ၏ခေါင်းစဉ်မြင့်မားတဲ့လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်သော်လည်းနီးပါးယခင်သုတေသနအတွက်လျစ်လျူရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သိမြင်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပေါ်လေ့လာမှုများအများစုခုနှစ်တွင် 16,17 ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်နွယ်နေပါသည်, အွန်လိုင်း / ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားအဓိက samples18-20 တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအကြားမျှခြားနားအထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှုတွေအအလားအလာယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်း made.21-24 လေ့လာရေးခဲ့ ဘာစွဲ၏ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။
ကျနော်တို့အလားအလာအလွန်အကျွံကျဘာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲ (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း) နဲ့တဦးချင်းစီအဘို့အဖော်ပြထားမြား၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပံ့ပိုးသိမြင်မှုနှင့်ဦးနှောက်ယန္တရားအကြားအချို့မျဉ်းပြိုင်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ, က alcohol- နှင့်အတူရင်ဆိုင်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-related pictures.30-32 အခြားလေ့လာမှုများလည်းပြုလုပ်တဏှာတုံ့ပြန်မှု (cue အလေးပေးခံရသည့်အခါအရက်အတူဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်များသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို (ventral striatum ၏ Active) ဓာတ်ပြုပြီးကြောင်းလူသိများသည် -reactivity) ဤသို့သောရောဂါဗေဒ gambling33 အဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များမှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်-အများဆုံးရနိုင်မကြာသေးမီကပင်အလွန်အကျွံကစားသူကိုဘာသာရပ်များအတွက် Warcraft19 ၏ကမ္ဘာ့ဖလားသို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာအဲဒီလေ့လာမှုများစွဲ-ဆက်စပ်စောင့်ကြည့်အပေါ်တုံ့ပြန်မှုစွဲလမ်းသောအမြင်မှဆုံ games.18 လှုံ့ဆော်မှုဟာစွဲလမ်းအပြုအမူ၏အရေးကြီးသောဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်သူတို့အဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများနှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဏှာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်ကိုလည်းကျဘာ၏အခြေအနေတွင်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအရေးပါသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။
ကြောင့် IATsex ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကျဘာများအလွန်အကျွံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သုံးစွဲအချိန်ကိုသိသိသာသာ IATsex ရမှတ်အတွက်ကှဲလှဲ၏ရှင်းပြချက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမပြုခဲ့စဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ratings, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုနှင့်အသုံးပြုသောလိင် applications များ၏နံပါတ်, အ IATsex ရမှတ်၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်.
ကြောင့်ကျဘာဆိုဒ်များအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှနေ့စဉ်အသက်တာ၌ Self-အစီရင်ခံပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေစဉ်အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue reactivity ကိုအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုများ၏အလင်း၌အနက်မည်အကြောင်း,.
နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလားအလာစွဲအမူအကျင့်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပံ့ပိုးနေတဲ့ယန္တရားအဖြစ် cue reactivity ကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲတစ်ခုခုနှင့်အတူအများအပြားလူနာအုပ်စုများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ 18,19,30-33 အဲဒီလေ့လာမှုများစွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုစောင့်ကြည့်အပေါ်တဏှာတုံ့ပြန်မှုဟာစွဲလမ်းအပြုအမူ၏အရေးကြီးသောဆက်စပ်မှုဖြစ်ကြောင်းရှုမြင်ရန်ဆုံ။
ကျနော်တို့ဆနျးစစျမပြုခဲ့ပေမယ့်ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်၏ဆက်နွယ်နေပါသည်ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ reactivity ကိုအကြားအလားအလာ link ကိုနှင့်ကျဘာစွဲဆီသို့တဲ့သဘောထားကိုများအတွက်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ.
အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည် (2012) နဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်း်ရောက်စွက်ဖက်
တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအိပ်ပျော်ခြင်းပျောက်ဆုံးနှင့်အပျက်သဘောဘဝအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောချိန်း, မေ့လျော့အဖြစ်, အင်တာနက်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်နှင့်အပြီးပြဿနာများသတင်းပို့ပါ။ အလားအလာပြဿနာများကိုဤမျိုးစုံမှဦးဆောင်တစ်ခုမှာယန္တရားအင်တာနက်ကိုလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထသက်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ကြောင့်မဲ့ဖြစ်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လျစ်လျူရှုမှုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (WM) စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်များသုံးယောက်ကျန်ရှိရုပ်ပုံအခြေအနေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ 4-ကျောတာဝန်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွား WM စွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ထို့အပွငျ hierarchical ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်အဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရမ္မက်တစ်ခုဖြည့်ညှင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံခွအေနအေအတွက် sensitivity ကို၏ကှဲလှဲတစ်ခုရှင်းပြချက်ညွှန်ပြ။ Results ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမှလိင်စိတ်နိုးထ၏ညွှန်းကိန်းများ WM စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက် processing သောအမြင်မှကူညီသည်။ စွဲ-related တွေကိုအားဖြင့် WM ်ရောက်စွက်ဖက်ကောင်းစွာဥစ္စာမှီခိုရာမှလူသိများသည်ဖြစ်သောကြောင့်တွေ့ရှိချက်အင်တာနက်စွဲမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံထုတ်ယူခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်-Making သဲသဲကွဲကွဲမရှိသော (2013) လက်အောက်တွင်နှောင့်ယှက်။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2013 ဇွန်4။
လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေသောအခါတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာချရပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနပြုချက်ကမရေရာမှုများအောက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အစောပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များမှရရှိသောအကျိုးဆက်များကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သဖြင့်ရေရှည်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အားနည်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူ ၈၂ ယောက်သည်လိင်မှုကိစ္စရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုမတိုင်မှီနှင့်၎င်းအပြီးတွင် ၄ င်းတို့၏လက်ရှိလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုဖော်ပြရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်ဘာသာရပ်များသည် Iowa Gambling Task ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုအားသာချက်နှင့်ကြားနေရုပ်ပုံများတွင်အားနည်းသောကဒ်ကုန်းပတ်များသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ပြသခဲ့ကြသည် (n = 82 / n = 41) ။
ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားကျယ်ပြန့်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကာလတွင်ကျဘာစွဲအငြင်းပွားဖွယ်ဆွေးနွေးထားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအမှတ်တံဆိပ် et al ၎င်း၏ယန္တရားများမှလေးစားမှုနှင့်အတူ။ (2011) ကြောင့်ကျဘာမှအားဖြည့်ယူဆ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာကြီးထွားလာ၏မျက်နှာကိုအတွက်မှုများထပ်တလဲလဲကျဘာအသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေပေမယ့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များလစျြလြူရှုသင့်ပါတယ်။ ဒီယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့နှစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျန်းမာ (ဎ = 25) နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုရန်ကြီးနှင့်ပြဿနာ (ဎ = 25) ကျဘာအသုံးပြုသူများသည်။
ရလဒ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုမှလိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုခန့်မှန်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပွငျကပြဿနာဘာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှုကနေရရှိလာတဲ့ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာနံပါတ်နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တွေနဲ့အရည်အသွေးကျဘာစွဲမှဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။
ရလဒ်ယန္တရားများသင်ယူခြင်း, အားဖြည့်ယူဆသောဆန္ဒပြည့်အယူအဆ, ကိုထောကျပံ့များနှင့်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်စွဲလမ်း။ ညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်ချည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစစ်အမှန်ဘဝအဆက်အသွယ်လုံလုံလောက်လောက်ကျဘာစွဲရှင်းပြလို့မရဘူး.
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2014 Aug;17(8):505-11.
ကျနော်တို့ 51 အမျိုးသမီး IPU နှင့် 51 အမျိုးသမီး Non-အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (NIPU) ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးသိမှု-အပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (2014)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်မသန်စွမ်းမှု - ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဂျာနယ်၊ Volume ကို 21, ပြဿနာ 4, 2014
အပြုသဘောအားကောင်းနှင့် cue-reactivity ကို, CA ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကယန္တရားဖြစ်စဉ်းစားနေစဉ်ယခင်အလုပ်, အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း, CA မှအားနည်းချက်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု။ ဤလေ့လာမှု၌, 155 လိင်ကွဲအထီး 100 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ rated နှင့်လိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့တိုးညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျ, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ sensitivity ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာ, CA မှအားနည်းချက်၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် CA. ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့သက်သေသာဓကများကိုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြသ
Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (2015)
တပ်ဦး Hum neuroscience ။ 2014 မေလ 27; 8: 375 ။
လူအများစုဟာထိုကဲ့သို့သောလေကြောင်းလိုင်းသို့မဟုတ်ဟိုတယ်ကြိုတင်အောင်အဖြစ်နေ့စဉ်ဘဝ၌မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပန်းတိုင်များလုပ်ဆောင်ရန် functional tool အဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော်အချို့တစ်ဦးချင်းစီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအတွက်ရရှိလာတဲ့သူတို့ရဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိန်းချုပ်တဲ့အရှုံးကနေခံစားနေကြရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုမကြာခဏအင်တာနက်စွဲအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder အဆိုပါ DSM-5 ၏နောက်ဆက်တွဲတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးသာ, ဒါပေမယ့်ပြီးသားအင်တာနက်စွဲလည်းကျဘာ, အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေး, စျေးဝယ်များနှင့်တစ်ဦးစွဲလမ်းအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာအင်တာနက်ကိုရှုထောငျ့ဖြစ်ခြင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူအခြား application များပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်နိုင်တယ်လို့စောဒကတက်ခဲ့သည်။
Neuropsychological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအထူးအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်သေချာသော prefrontal လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မကြာသေးခင်သီအိုရီမော်ဒယ်များနှင့်အညီဖြစ်သည့်အင်တာနက်စွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ထွက်ထောက်ပြကြသည်။ အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအသုံးပြုမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်အင်တာနက်-related တွေကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြသောအခါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအထူးသဖြင့်လျှော့နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်-related တွေကို processing အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူနှောင့်ယှက်။ ဤတသမတ်တည်း, အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging နှင့်အခြား neuropsychological လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကိုကြောင်း cue-reactivity ကို, တဏှာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအင်တာနက်စွဲကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောသဘောတရားတွေဟာဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်လျှော့ချအပေါ်တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူတော်တော်များများတူညီပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစတစ်ခုစွဲအဖြစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများခွဲခြားအလေးပေး။ တဦးတည်းကုထုံးပန်းတိုင်သည်တိကျသောသိမှုနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမျှော်လင့်ထားပြင်ဆင်ခြင်းများကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မြှင့်တင်ရန်သင့်ပါတယ်အဖြစ် neuropsychological နှင့် neuroimaging ရလဒ်များကို, အရေးကြီးသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိသည်။
တိကျတဲ့ Internet application များ (SIA) ၏တစ်ဦးစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျနော်တို့ငြင်းခုန် - ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့် Davis ကအားဖြင့်မော်ဒယ်နှင့်အညီ (2001) - ။ psychopathological လက္ခဏာတွေအထူးသဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု (အမှတ်တံဆိပ် et al, 2011; Kuss နှင့် Griffith က, 2011; Pawlikowski နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2011; Laier et al ။ , 2013a; Pawlikowski et al ။ , 2014) ။ ငါတို့သည်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဓာတ်တစ်ဦးချင်းအချို့ applications များ၏အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ဆန္ဒပြည့်အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်နောက်တဖန်ထိုအပလီကေးရှင်း overuses သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ကြောင်း hypothesize ။ ထိုကဲ့သို့သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဓာတ်ဘို့ဥပမာတစျခုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (Cooper က et al ။ , 2000a,b; Bancroft နှင့် Vukadinovic, 2004; Salisbury, 2008; Kafka, 2010), အရာသူ / သူမလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆန္ဒပြည့်မျှော်မှန်းသောကွောငျ့, တစ်ဦးချင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုပါကပိုမိုစေသည် (Meerkerk et al ။ , 2006; လူငယ်တို့, 2008). ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်ယူဆကဲ့သို့သော Internet application များအခြို့သောအလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်အောင်နိုငျသောမျှော်မှန်းအဲဒီ Internet application များမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်ဟုယုံကြည် (Robinson နဲ့ Berridge, 2000, 2003; Everitt နှင့် Robbins, 2006) နှင့်သောတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောပလီကေးရှင်းသူ / သူမ၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဆန္ဒပြည့်ကြုံတွေ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သော applications များ၏အကျိုးဆက်အသုံးပြုမှုနှင့်လည်းသီးခြားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မျှော်လင့်ထားနှင့်ဖြေရှင်းစတိုင်အပြုသဘောအားဖြည့်နေကြသည်။ ဤသည်ပြီးသားဘာစွဲဘို့ဥပမာ, ပြသထားသည် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011; Laier et al ။ , 2013a) လည်းအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားဘို့အယန္တရားအများဆုံးဖွယ်ရှိသည် (ဥပမာ, Tychsen et al ။ , 2006; ရီ, 2006) ။ ပိုမိုယေဘုယျ psychopathological သဘောထားတွေကို (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု) အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခံရဖို့ထင်နေကြသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့်တကအသက်တာ၌ပြဿနာများမှအာရုံဖို့ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအထီးကျန်သို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန်အဖြစ်အပျက်သဘောခံစားချက်များကို, ရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ် Internet application များ (ဥပမာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်၏အဓိကငြင်းခုံပုံထဲမှာအကျဉ်းချုံးထားပါသည် Figure11.
ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲ (2015) ၏ရောဂါလက္ခဏာမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2015 Mar;4(1):14-21.
တချို့ကတစ်ဦးချင်းစီပုဂ္ဂလိကဘဝသို့မဟုတ်အလုပ်အတွက်ပြင်းထန်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်သည့်စွဲလမ်းထုံးစံ၌ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းအဖြစ်ကျဘာအကြောင်းအရာများကို, စားသုံးကြသည်။ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်တစ်ခုမှာယန္တရားကျဘာအသုံးပြုမှုနှင့်အခြားတာဝန်များကိုနှင့်ဘဝ၏တာဝန်ဝတ္တရားများအကြားရည်မှန်းချက်-oriented switching နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချနိုင်ပါသည်။
ဒီရှုထောင့်ကိုဖြေရှင်းရန်, ငါတို့နှစ်စုံနဲ့အလုပ်အမှုဆောင် multitasking ကိုပါရာဒိုင်းနှင့်အတူ 104 အထီးသင်တန်းသားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး: တစ်ခုမှာထားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ရုပ်ပုံများပါဝင်သည်, အခြား set ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးအစုံအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုအချို့သောသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီခွဲခြားခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဤ multitasking ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်လျော့နည်းမျှမျှတတစွမ်းဆောင်ရည်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့မြင့်မားတဲ့စိတ်သဘောထားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာခဏသုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပေါ်အလုပ်လုပ်လျစ်လျူရှုဖြစ်စေဒီစိတ်သဘောထားနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များ။
ရလဒ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသောအခါ, multitasking ကို performance ကိုကျော်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချကြောင်းညွှန်ပြ, အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူတွေနဲ့ဘာစွဲကနေရရှိလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, စွဲလမ်း၏စိတ်ခွန်အားနိုးမော်ဒယ်များထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်ဖို့အကွံဖြစ်စေရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။
ပြဿနာကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍဆီသို့ဦးတည်လက်ရှိလေ့လာမှုအချက်၏ရလဒ်များကိုသည် prefrontal cortex ကကမကထပြုခဲ့ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များကို, (နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014) ။ အထူးသဖြင့်စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့တစ်ဦးရည်မှန်းချက်လုံလောက်သောထုံးစံ၌ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုအကြားအကူးအပြောင်းတစ်ခုလျှော့ချနိုင်စွမ်းကိုကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တဦးတည်းယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်။
ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter (2015)
စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2015 16 မည် 49: 7-12 ။
မကြာမီကလေ့လာမှုများကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအကြားတူညီပြသပြီးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်ကျဘာစွဲခွဲခြားဖို့ငြင်းခုန်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုခုနှစ်, သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများကြသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များယခုအချိန်အထိ, ဘာစွဲထဲမှာလေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ဒီစမ်းသပ်လေ့လာမှုမှာ, 128 လိင်ကွဲအထီးသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ Implicit အစည်းအရုံးစမ်းသပ်မှုပြီးစီး။
ရလဒ်များကျဘာစွဲ, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဆီသို့ဦးတည် sensitivity ကိုအဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာဆီသို့ဦးတည်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့သဘောထားတွေကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုပြသ။ ထိုမှတပါး, အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင့်မားသောပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များပြခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, အထူးသဖြင့်ကျဘာစွဲဆီသို့ဦးတည်တော်မှာကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူအပြုသဘောသွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသုတေသနကနေတွေ့ရှိချက်မှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသို့မဟုတ်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြား analog တွေကိုအလေးပေးပြောကြား.
ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများသည် (2015) ၏့ Analog နမူနာကနေရလဒ်တွေကို: ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
တပ်ဦး Psychol ။ 2015 မေလ 22; 6: 653 ။
အဆိုပါ phenomenology, ခွဲခြားနှင့်ကျဘာစွဲ၏အဖြေရှာတဲ့စံနှင့် ပတ်သက်. မျှသဘောတူညီမှုရှိပါတယ်။ တချို့ကချဉ်းကပ်မှုချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအလွန်အရေးပါယန္တရားများနေသောများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့တူညီဆီသို့ညွှန်ပြ။ အတော်ကြာသုတေသီများတစ်ခုစွဲ-related ဆုံးဖြတ်ချက်ခွအေနကေိုအတွင်းမှာတစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်း-related လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်လိုတဲ့သဘောထားကိုပြခြင်းငှါလည်းကောင်းကြောင်းစောဒကတက်ကြသည်။
ရလဒ်များကျဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေနဲ့အတူလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်ပုံသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖြစ်စေရန်တော်မှာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်မြင့်မားသောချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုပြသသူကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ကျဘာစွဲမြင့်မားရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင်းထင်ရှားလေ့လာဆန်းစစ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုဖို့ analog, ရလဒ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုကျဘာစွဲနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆီသို့ sensitivity ကိုအတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ကျဘာအသုံးပြုမှုကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်ကြားချက်၏ပြင်းထန်မှုတခုတခုအပေါ်မှာစုဆောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကျဘာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအကြားတူညီဘို့နောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားသည်။ ထိုသို့သောတူညီ cybersex- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့မှဒါနဲ့နိုငျသညျ။
J ကိုလိင် Med ။ 2011 Mar;8(3):764-72.
အမှန်ကတော့ unexplored နှင့်ဒီမှာအာရုံ, SEMB နှင့် nonsexual mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများအကြားအလားအလာဆက်ဆံရေးဖြစ်ကြသည်။
ခြောက်လစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများတွင် variable (စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလျော့ရက်ပေါင်း, ကျန်းမာရေးအခြေအနေ, အသက်တာ၏အရည်အသွေး, နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း) နှစ်ခုအဆင့်ဆင့် SEMB ၏ (သုံးစွဲသူများ nonusers) ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာခဲ့သည်။
559 ဆီယက်တဲလ်-Tacoma ၏နမူနာ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးအရွယ်ရောက် 2006 အတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်ကျား, မတစ်ဦး SEMB အတွက် parameterized Multivariate ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်များ (2 × 2) factorial ဒီဇိုင်းပေါင်းများစွာအသက်အပိုင်းအခြားများအတွက်ချိန်ညှိထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်: SEMB 36.7% (ဎ = 205) ကအစီရင်ခံခဲ့သည် နမူနာ၏။ အများစုမှာ SEMB အသုံးပြုသူများသည် (78%) လူဖြစ်ကြ၏။ nonusers နှိုင်းယှဉ်အသက်အပိုင်းအခြား, SEMB သုံးစွဲသူများအဘို့အညှိပြီးနောက်အသက်ဆင်းရဲတဲ့အရည်အသွေးကိုပိုမို mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလျော့ရက်နှင့်အောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။
အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (2012) နဲ့ပြည်သူ့အတွက် Striatal Dopamine ပို့ဆောင်ရေးလျှော့ချ
ဇီဝဆေးပညာ၏ဂျာနယ်နှင့်ဇီဝနည်းပညာ, Volume ကို 2012
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါ (IAD) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကပိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်လာသည်နှင့်အသုံးပြုသူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုလျှင်မြန်စွာတိုးတကျခဲ့။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု 99mTc-TRODAT-1 တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography (SPECT) ဖြင့်တိုင်းတာသည့် striatal dopamine Transporter (DAT) အဆင့်ဆင့်ပါလျှင်ဦးနှောက်ကို Scan ဖတ် IAD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်ဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ SPECT ဦးနှောက် Scan ဖတ်5အထီး IAD ဘာသာရပ်များနှင့်9ကျန်းမာအသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ IAD ဘာသာရပ်များနီးပါးနေ့စဉ်အင်တာနက်အသုံးပြုကြသည်ကို၎င်း, မော်နီတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ 8 နာရီ (ဆိုလိုပါသလော±? SD, 10.20 ± 1.48 နာရီ) ထက်ပိုပြီးနေ့စဉ်သုံးဖြုန်း အများအားဖြင့်, ဆိုက်ဘာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chatting အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း, နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကြည့်ဘို့။ ဤရွေ့ကားဘာသာရပ်များအများအားဖြင့်၎င်းတို့၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာအင်တာနက်နှင့်အတူကနဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြ (ဟောင်း 12.80 ± 1.92 နှစ်, SD က±အသက်အရွယ်ဆိုလို) နှင့် (6 ± 7.60 နှစ်, SD က±ဆိုလို) 1.52 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပြီးအဘို့အ IAD ၏လက္ခဏာများရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ striatum ၏ DAT စကားရပ်အဆင့်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့ပြသနှင့် V ကို, W နှင့် Ra ကိုအလွန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ IAD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များကို IAD အလေးအနက်ဦးနှောက်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် IAD အဆိုပါ dopaminergic ဦးနှောက်စနစ်များအတွက်အလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်သရုပျဖျောစေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IAD သည်အခြားစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူအလားတူ neurobiological မူမမှန်ဝေမျှစေခြင်းငှါ၎င်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံ
အင်တာနက်စွဲအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ differential စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2013)
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013;8(2):e55162. doi: 10.1371/journal.pone.0055162.
အဆိုပါလေ့လာမှုစိတ်ဓါတ်များနှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်နိမ့်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုစူးစမ်း။ သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်စွဲလမ်း, ခံစားချက်, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, schizotypy နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာစရိုက်များ၏အဆင့်ဆင့်လေ့လာစူးစမ်းဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီအားပေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာထို့နောက် 15 မိများအတွက်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုပေးသောနှင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်များအတွက်ပြန်လည်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
အလားတူပဲ, ပြဿနာအပြုအမူတွေ၏အရာဝတ္ထုမှထိတွေ့မှုစိတ်ဓါတ်များလျှော့ချရန်ကိုတွေ့ထားပြီ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် , ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ဤအကြောင်းရင်းများ (ဆိုလိုသည်မှာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ညစ်ညမ်း) ၏နှစ်ဦးစလုံးပြင်းထန်စွာပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ် , , ဒါကြောင့်ကောင်းစွာသည်ဤအချက်များလည်းအင်တာနက်စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါဖြစ်မည်အကြောင်း ။ အမှန်မှာကပြဿနာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမိမိတို့အတွက်အဲဒီအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်များကိုမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ဤမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေပြဿနာအပြုအမူတွေအတွက်ထပ်မံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို generate စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် .
ရလဒ် '' အင်တာနက်စွဲ '' ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်အခြေအနေအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးဒီကဗျာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ဒီအကြိုးသကျရောအင်တာနက်စွဲလမ်း '' ၏သီအိုရီမော်ဒယ်များအတွက်အကြံပြုထားသည် , တစ်ဦးကြိမ်မြောက်အလားတူတွေ့ရှိချက်လည်းအင်တာနက်လိင်စွဲအပေါ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌မှတ်ချက်ချထားသည် , ဤအစှဲအကြားဆင်တူရိုးမှားအကြံပြုရသော။ စှဲ၏ခွဲခြားအတှကျလိုအပျကြောင့်ခံစားချက်ပေါ်မှာဤအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတစ်ခုဆုတ်ခွာအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုရကျိုးနပ်သည်, အကြံပြု 1, , .
ဒါဟာအင်တာနက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးသာရှိပြီးအရေအတွက်အင်တာနက်၏သော့အသုံးပြုမှုနှစ်ခုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်ဖြစ်သကဲ့သို့, ထိုအထဲကထောက်ပြရပါမည် , တစ်ဦးကြိမ်မြောက်ထိုအဆုံးစွန်သောလှုပ်ရှားမှုများရှင်းလင်းစွာအလားအလာ-စွဲလမ်းပြည်နယ်များမှဘာသာရပ်များမှာ, က '' အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု '' နှင့်စပ်လျဉ်းဆိုရလဒ်များကိုအမှန်တကယ်စွဲ၏အခြားပုံစံများ (ဆိုလိုသည်မှာညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားရန်) ၏သရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကအင်တာနက်အလွဲသုံးစားမှုအပေါ် Kos နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ၏ကျွန်း၏ 12-18 အသက်တစ်ခုလုံးကိုဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားလူဦးရေရဲ့ cross-section လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုတင်ပြ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြောင်းညွှန်ပြ အင်တာနက်စွဲ တိုးပွါး အဘယ်သူမျှမကာကွယ်ကြိုးစားမှု2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနဦးစစ်တမ်းကနေဖြစ်ရပ်ဆန်းတိုက်ဖျက်ဖို့လုပ်ရာကဒီလူဦးရေ၌တည်၏။ ဒီအတိုးကအင်တာနက်ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုးဖို့အပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများခန့်မှန်းချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အဆင့်ကိုလျှော့မတွက်လေ့ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်မိဘဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုသာသေးငယ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်အခန်းကဏ္ဍများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းရာမှဆယ်ကျော်သက်ကာကွယ်ပေးနိုငျပါဘူး။ အများဆုံးအင်တာနက်စွဲနှင့်ဆက်စပ်သုံးခုအွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း, အွန်လိုင်းလောင်းကစားနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
အင်တာနက်စွဲအင်တာနက်ထိန်းအကွပ်မဲ့ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဂိမ်းကစားခြင်းအမျိုးမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်အီးမေးလ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း, ချတ်သို့မဟုတ် SMS စာတိုပေးပို့ရေး: သုံးပုံစံများအတွက်တငျပွထားတဲ့. ယောက်ျားလေးများနှင့်အမျိုးသားများစိတ်ကျရောဂါအတွက်ထိုသို့အကြောင်းမရှိထက်စွဲပိုမိုအကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ADHD အခြေအနေကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်သိသာထင်ရှားသောနောက်ခံအချက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ပြဿနာ အင်တာနက်ကို သုံးပါနှင့်သုံးနိုင်ငံများတစ်ဝှမ်းသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းများ (2015) မှကျောင်းသားများများထဲတွင်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု
Acad စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015 ဇူလိုင် 1 ။
စာရေးသူများသည်ခရိုအေးရှား၊ အိန္ဒိယနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားမှကျောင်းတစ်ကျောင်းစီတွင်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်သည့်ဆေးကျောင်းသားများအကြားပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်ထိုကျောင်းသားများအကြားပြproblemနာအသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ မေးခွန်းလွှာတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်လူငယ်၏အင်တာနက်စွဲခြင်းစာမေးပွဲပါဝင်သည်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 842 ဘာသာရပ်များပါဝင်သည်။ ယေဘုယျအား 38.7 နှင့်ဖြေဆိုသူ 10.5% ကိုပျော့နှင့်အလယ်အလတ်အမျိုးအစားအတွက်သွင်းယူ. ကျောင်းသားများကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်း (0.5%) ကပြင်းထန်ကဏ္ဍသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် cutoff အထက်သွင်းယူတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုတစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားနဲ့ browsing များ, social networking, chatting, ဂိမ်း, စျေးဝယ်ခြင်း, ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့။ သို့သော် e-mail သို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး ပတ်သက်. နှင့်အတူအုပ်စုနှစ်စုအကြားခြားနားခြင်းအလျှင်းမရှိခဲ့သညျ။
ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို - ဒါဟာ unidimensional Construction (2013) တစ်ဦး multidimensional နှင့်မဟုတ်ပါဘူး
မေ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ထပ်ဆင့်သုတေသနနှင့်သီအိုရီ
ဒါဟာရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (PIU) တစ်ဦးကွဲပြား entity ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကအင်တာနက်ကဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်လိင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အချိန်ဖြုန်းနဲ့တူသီးခြားအင်တာနက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုအကြားမတူညီရပါမည်ရှိမရှိရှိမရှိနေဆဲဆွေးနွေးငြင်းခုံတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားခြားနားသောတိကျသောအင်တာနက်ပေါ်ကလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. PIU ၏ဘုံနှင့် differential ကိုရှုထောင့်တစ်ဦးပိုမိုနားလည်စေရန်အထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုသုံးစုတိကျသောအင်တာနက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုမိမိတို့အသုံးပြုမှုကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကွဲပြားသည့်လေ့လာခဲ့ကြသည်: တဦးတည်း 69 ဘာသာရပ်များအုပ်စုသီးသန့်အသုံးပြုသောအင်တာနက်ကိုဂိမ်း (IG) (မဟုတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (အိုင်ပီ)), 134 ဘာသာရပ်များ (IG ပေမယ့်မဟုတ်) IP ကိုအသုံးပြု, နှင့် 116 ဘာသာရပ်များ IG နှင့် IP (ဆိုလိုသည်မှာ unspecific ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို) နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရလဒ်ရှက်ကြောက်စိတ်နှင့်ဘဝကျေနပ်မှုတစ်ဦး IG ၏ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သဘောထားကို, ဒါပေမယ့်မရအိုင်ပီ၏ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အချိန်အွန်လိုင်း IG နှင့် IP နှစ်ဦးစလုံး၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းခဲ့နေခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်အဘယ်သူမျှမဆက်စပ် IG နှင့် IP ၏ရောဂါဗေဒအသုံးရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရဲ့ IP အဓိကအားဆွနှင့်လိင်စိတ်နိုးထရရှိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆန္ဒပြည့်အသုံးပြုသည်သော်လည်းဂိမ်းများ, စစ်မှန်သောအသက်တာ၌လူမှုရေးလိုငွေပြမှု (ဥပမာ, ရှက်ကြောက်စိတ်) နှင့်ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှုလျော်ကြေးပေးရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါကောက်ချက်ချ။
ဤရလဒ်သည်အနာဂတ်တွင်လေ့လာမှုများအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောငျ့ကွာခြားအစားတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်ရပ်ဆန်းအဖြစ် PIU စဉ်းစားများအတွက်ဝယ်လိုအားထောက်ခံပါတယ်။
အင်တာနက်စွဲလမ်း (2011) ရက်နေ့တွင် dopaminergic စနစ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
Acta Medica Medianae 2011; 50 (1): 60-66 ။
FULL PDF ဖိုင်ရယူရန်
, ဖြစ်စဉ် neurobiological နှင့် pharmacological data တွေကိုသွယ်ဝိုက်အင်တာနက်ကိုစွဲနှင့်အတူတြူမှဆက်စပ်နေသောပစ္စည်းဥစ္စာစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ pathopsychology အတွက်တူညီ, ဖော်ပြသည်။ ဂိမ်းထဲကနေလှုံ့ဆော်မှုပြန်ကြားခြင်း, စွဲဟာ nape ဒေသများတွင်ပိုမိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု, လက်ဝဲ dorsolateral, prefrontal cortex ပြသနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုထက် parachipocampal gyrus ကျန်ကြွင်းစေပြီ။ ခြောက်ပတ်ကြာ bupropion ကုထုံး, အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရန်အလိုဆန္ဒ, ကစားစုစုပေါင်းကြာချိန်နှင့် dorsolateral prefrontal cortex အတွက်သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်စွဲနှင့်အတူလျှော့ချနေကြသည်။
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (18) ၏ Subtype Generalized အင်တာနက်စွဲအဖြစ်ဘုံမဟုတ်ပါကလေ့ကဒီအသုံးပြုမှု၏တိကျတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုထားခြင်းမရှိဘဲ, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ content တစ် multidimensional, အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ ဤပုံစံထိုကဲ့သို့သောဝါသနာစတာတွေပေါ်အခြေခံပြီးအွန်လိုင်း surfing, ရှာအင်ဂျင်သုံးစွဲမှုသည်အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သော chatting, instant messaging, ဖိုရမ်များနှင့်ဆွေးနွေးမှုအုပ်စုများအဖြစ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်လျက်, ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်အဘို့အယေဘုယျစွဲမှအများအားဖြင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည် သို့ရာတွင်ထိုသို့လူများတို့သည်သီးခြားအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများထက်ယေဘုယျကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုစွဲကြီးထွားပိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကအလွဲသုံးစားမှုများ Subtype ၏ယူဆချက်များ၏အရေအတွက်အတိအကျကိုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမများသဘောတူညီမှုရှိပါသည်။ သို့သော်လေးလုံးသို့မဟုတ်ငါးလုံးအမျိုးအစားများအများဆုံးသတ်မှတ်ကြသည်နှင့်, မိမိအလုပ်အတွက်, Hinićအယူအဆ6+ 1 Subtype accentuates:
1 ။ ဆိုက်ဘာ-Relational စွဲ
2 ။ Cybersexual စွဲ
3 ။ ပြန်ကြားရေး Overload
4 ။ net ကဂိမ်း
5 ။ compulsive အွန်လိုင်းစျေးဝယ်
6 ။ ကွန်ပျူတာနှင့်အိုင်တီစွဲ
7 ။ စွဲလမ်း၏ရောနှောထားသောအမျိုးအစား
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ကုသရေး
အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, စက်တင်ဘာလ 2008 vol ။ အဘယ်သူမျှမ 52 ။ 1 21-37
Kimberly အက်စ် Young က
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲပုံမှန်အားဖြင့်, ကြည့်ရှုဒေါင်းလုတ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ကူးယဉ်အခန်းကဏ္ဍ-ကစားခန်းတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါဝငျသညျ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူက Web ဆိုဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေး၏အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းပါဝင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအွန်လိုင်း၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုပေးထား, အင်တာနက်လိင်စွဲလမ်းအသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်ပြဿနာအွန်လိုင်းအပြုအမူ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ဖုံးအုပ်နေတဲ့မေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သောသူအေသင်တက္ကသိုလ်ကနေ 514 ကောလိပ်ကျောင်းသားများ, ခဲ့ကြသည် လူငယ်၏အင်တာနက်စွဲမှတ်မှုစမ်းသပ်မှု၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆိုက်ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုစစ်ဆေးသည့်အကြေးများ၊.
ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များနဲ့အခြားအဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားစွဲ, cybersexual စွဲ, သတ်သေ ideation နှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၏ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုထုံးမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအတွက်ထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းအသစ်တခု psychopathological parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပြဿနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: အန္တရာယ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်၏အကြောင်းရင်းများ, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်း (2011) နဲ့ထုံးစံ Logistic ဆုတ်ယုတ်
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2011 Jan-Feb;14(1-2):51-8.
ပျမ်းမျှအားတွင်, ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုသူ MSN ကို, ဖိုရမ်များ, Youtube, ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ, အခန်းပေါင်း chat, ကြော်ငြာက်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါက Google, Yahoo !, သူတို့ရဲ့ e-mail,, ftp, ဂိမ်းများနှင့်ဘလော့ဂ်များကို non-ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုသူထက်ပို. PIU များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်များ, အထီး, အလုပ်လက်မဲ့အစီအစဉ်များအတွက်ကျောင်းအပ်, အနုတ်လက္ခဏာယုံကြည်ချက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ခြင်းညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်း, နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခဲ့သည်. ထို့ကြောင့် PIU ဂရိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပျံ့နှံ့သည်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကနျြးမာရေးအရာရှိများကအားပေးပြီးမှရပါမည်။
စွန့်စားမှုအချက်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအလားအလာပြဿနာနှင့်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2011)
BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2011; 11: 595 ။
အဆိုပါလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်အလားအလာ PIU နှင့် PIU လွတ်လပ်စွာအပြန်အလှန်ဂိမ်းကစားရင်းအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်, လူမှုရေး, ဖျော်ဖြေရေး, ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးချပြီးနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျကအလားအလာ PIU ပြောင်းပြန်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးချပြီးနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်အစီရင်ခံစာများ [19,37,38] မကြာခဏအင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးထက်ပိုလေးပုံတစ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးကိုရယူသုံးဘို့အင်တာနက်အသုံးချကြောင်းဖော်ပြသည်။
မကြာခဏအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုရယူသုံးနှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်း [39,40] နှင့်နောက်ဆက်တွဲ PIU  ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒါကွောငျ့က PIU နှုန်း se ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်အင်တာနက်ဆိုဒ်များ၏တိကျသောအကြောင်းအရာထက်အင်တာနက်အလယ်တန်းမှုကိုထငျရှားစခွေငျးငှါအဆိုပြုထားသည်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့် Cypriot မြီးကောင်ပေါက်အင်တာနက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2014)
int J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Med ကနျြးမာရေး။ 2014 မေလ6။
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှုဒီဇိုင်း Cypriot မြီးကောင်ပေါက်တစ်ကျပန်းနမူနာ (ဎ = 805) (အကြားလျှောက်ထားခဲ့သည်အသက်အရွယ်ဆိုလို: 14.7 နှစ်ပေါင်း).
လေ့လာမှုလူဦးရေအနက်ဟာနယ်စပ်ဒေသစွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် (biu) ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနှင့်အစွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် (AIU) အသီးသီး 18.4% နှင့် 2% ခဲ့ကြသည်. biu နှင့် AIU ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြန်ထုတ်ယူ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုနှင့်အတူဂိမ်းထဲမှာပါဝင်ထည့်သွင်း
biu နှင့် AIU နှစ်ဦးစလုံးဆိုးရွားစွာမြီးကောင်ပေါက်အကြားထင်ရှားတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေး maladjustment နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကို Process ကိုစွဲစမ်းသပ်ခြင်း: အင်တာနက်အားဖြင့် facilitated လုပ်ငန်းစဉ်မှစွဲအဘို့အပြ (2015)
ပြုမူနေသိပ္ပံ (ဘေဆယ်) ။ 2015 Jul 28;5(3):341-352.
အင်တာနက်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုစစ်ဆေးရန် Internet Process Addiction Test (IPAT) ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ IPAT ကိုစိတ်စွဲလမ်းမှုဖြင့်ဖန်တီးထားပြီး“ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု” ဟူသောဝေါဟာရသည်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြproblemနာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာအင်တာနက်သည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်အမျိုးမျိုးကိုရယူရန်အသုံးပြုသောကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အင်တာနက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ, သို့သော်, လျော့ချနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ထိထိရောက်ရောက်အင်တာနက်အားဖြင့် facilitated တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များမှသုတေသီများနှင့် Clinician ညွှန်ကြားကြောင်းအသစ်စိစစ် tool ကို သို့ဖြစ်. အသုံးဝင်သောပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့လာမှုကအင်တာနက်ကို Process ကိုစွဲစမ်းသပ်ခြင်း (IPAT) ကောင်းသောတရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရပြကြောင်းပြသထားတယ်။ လေးစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များထိထိရောက်ရောက် IPAT နှင့်အတူအဘို့အပြခံခဲ့ရသည်: အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, အွန်လိုင်းလူမှုရေးကွန်ရက်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဝက်ဘ် surfing ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏နောက်ထပ်သုတေသနနှင့်ကန့်သတ်မှုအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးအထီးအတွက်ဘာစွဲ (2015) ဆုံးဖြတ်
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2015 စက်တင်ဘာ 16
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များက CyberSex စွဲလမ်းမှု (CA) ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားနိုင်မှုအညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် CA လက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီစေ့စပ်ဖြန်ဖြေမှုကိုလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများသည် CA ၏လက္ခဏာများ၊ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအကင်းပါးပါး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းရှိလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု။ ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှင့်အပြီးတွင်သူတို့၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏, CA လက္ခဏာတွေနှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ , CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်အစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကြောင့်ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းမှအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြရာ, CA ၏သီအိုရီယူဆချက်၏နောက်ခံ, ဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်.
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု, စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများများထဲတွင်တုံ့ပြန်ချက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း (2017)
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2017 ဧပြီ 17 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2016.0669 ။
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စွန့်စားမှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည်ပြproblemနာဖြစ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိရန်အရေးကြီးသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၇၁ နှစ်အကြားရှိပါဝင်သူ ၄၄၉ ဦး သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်မိမိကိုယ်မိမိအကူအညီပေးသည့်အဖွဲ့များအပါအဝင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအင်တာနက်ဖိုရမ်များမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အနက် ၆၈.၉% ကိုပြmနာမရှိသောအသုံးပြုသူများ၊ ၂၄.၄% - ပြproblemနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့် ၆.၇% - စွဲလမ်းစေသောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ဆွေးနွေးမှုဖိုရမ်များကိုမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ကောလာဟလများမြင့်မားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းအဆင့်နိမ့်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအနက်အင်တာနက်စွဲလမ်းစေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ လူကြီးများအတွက်အိုဝါအဓိကအားဖြင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, အနိမ့်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုမှုအဖြစ်မြင့်မားတဲ့စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်မြင့်မားသောမှရှောင်ရှားဖြေရှင်းမှတဆင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကမြီးကောင်ပေါက်အတွက် Self-စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်မွေးမြူရေးအပေါ်လူကြီးများအတွက်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ရှောင်ရှားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်် IA အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်် IA နဲ့ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များပစ်မှတ်ထားမှကြားဝင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Clinician ကူညီလိမ့်မည်။
ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု, ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှု: ဂရိ (2017) တွင်ကျောင်း-based လေ့လာမှု
int J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Med ကနျြးမာရေး။ 2017 ဧပြီ 22 ။ pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2016-0115/ijamh-2016-0115.xml ။ Doi:
ဒီလေ့လာမှုကအင်တာနက်စွဲ (အိုဝါ) နှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်များ၏ပျံ့နှံ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်များ၏ profile များကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီ Cross-Section, ကျောင်း-based လေ့လာမှုမှာတော့ 8053 အလယ်တန်းနှင့် 30 ၏ 21 ကျောင်းသားများကို (အသက်အနှစ် 12-18) အထက်တန်းကျောင်းတစ် multistage stratified ကျပန်းနမူနာ technique ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကို aiddiction စမ်းသပ်မှု (IAT) လူမှုအသက်အပိုင်းအခြား, အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်အတွေ့အကြုံအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါးထောင်ငါးရာကိုးဆယ်ကျောင်းသားများကို (တုန့်ပြန်မှုနှုန်း 69.4%) ပါဝင်ခဲ့။ 50 (526%) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကာလအတွင်းကျူးလွန်သူအဖြစ်သားကောင်များနှင့် 10.1 (403%) အဖြစ်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်ကြုံတွေ့နေချိန်တွင်ရောဂါဗေဒတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (IAT ≥7.3), 367 (6.6%) မှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ multivariable မော်ဒယ်များခုနှစ်, အိုဝါ၏အလေးသာဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်အတွက်အင်တာနက်ကဖေးလည်ပတ်မှု, chatrooms အသုံးပြုမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ်အွန်လိုင်းနာရီနှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအထီး, အဟောင်းများကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်ပရိသတ်များဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်စဉ်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်သားကောင်များ, အဟောင်းတွေ, အမျိုးသမီး, Facebook နှင့် chatrooms အသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလည်းသားကောင် [: 5.51-3.92 လေးသာမှုအချိုးအစား (OR) = 7.74, ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI)] ပါပြီမှသိသိသာသာပိုမိုခဲ့ပါတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: ပျံ့နှံ့နေတဲ့, ဆက်စပ်သည့်အချက်များနှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု (2017)
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2017 ဇူလိုင် 24; 257: 163-171 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2017.07.039 ။
အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားပြဿနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှု (PIU) ၏ပျံ့နှံ့မှုတိုင်းတာရန်နှင့် PIU ကျား, မကွဲပြားမှုမှုကိုအလေးအနက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ဒီလေ့လာမှုက။ ကျောင်းသားများလူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, အမည်မသိမေးခွန်းလွှာစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်။ အကွိမျမြားစှာ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြုံငုံနမူနာနှင့်ကျား, မများက PIU နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ်ငါးကျောင်းများနှင့် 2022 ကျောင်းသားများကိုစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ PIU ၏ပျံ့နှံ့အမျိုးသမီးအကြားယောက်ျားနှင့် 14.2% အကြား 10.1% ခဲ့သည်။ အထီး 15 နှစ်အရွယ်နှင့်အမျိုးသမီး 14 နှစ်အရွယ်တဖြည်းဖြည်းအမျိုးသမီးအကြားအသက်အရွယ်နှင့်အတူလျှော့ချသောအမြင့်ဆုံး PIU ပျံ့နှံ့ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသားကသာ 13.5% မိဘများကသူတို့ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tသူကအထီးကျန်ခံစား၏အာရုံခံစားမှု, အသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း, ကွန်နက်ရှင်၏နာရီအရေအတွက်ကများနှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်လည်ပတ်နှစ်ဦးစလုံးလိင်အတွက် PIU များ၏အန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေအမျိုးသမီးအကြားအကာအကွယ်ခဲ့နေတုန်း, သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများတက်ရောက်ခြင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲ chatting တွေနဲ့ဖိုင်များ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ယောက်ျားပေါင်းကြားအင်တာနက်အချက်မှာအသုံးပြုမှု၏တည်နေရာနှင့်အမျိုးသမီးအကြားငယ်ရွယ်သောအသက်, PIU နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ PIU လာမည့်နှစ်များတွင်တစ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များကိုလေ့လာရပါမည်။
လိုက်ဖက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (2017) ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲများတွင်ရောဂါဗေဒ၏ Cross-Section သက်သေအထောက်အထား: ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်း
J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2017 သြဂုတ် 18; 225: 265-272 ။ Doi: 10.1016 / j.jad.2017.08.045 ။
Stockdale L ကို1, Coyne သည် SM2.
အင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder စကေး (IGDS) ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းနေတဲ့အသုံးများအတိုင်းအတာ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုဆော့ကစားသောသူအပေါင်းတို့သည်လူတွေ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းထိခိုက်တဲ့ရောဂါဗေဒဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပေါင်းသိသိသာသာဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ အနည်းငယ်သုတေသီများဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူတွေကိုအသက်, လိင်, လူမျိုး, နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးလိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ IGDS အပေါ်အခြေခံပြီးဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
စွဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆင်းရဲတဲ့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေအပါအဝင်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်စွဲ, တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်တိုးမြှင့်စိတ်ခံစားမှုအခက်အခဲပြသကျပိုလူမှုရေးအရအထီးကျန်ခံစားရတယ်, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုကိုရောဂါလက္ခဏာတွေပြသဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအဘို့မူထူးခြားတဲ့အန္တရာယ်မှာရှိကြ၏။
တစ်ဦးနှစ်ဦး-site ကိုစစ်တမ်း (2018) မှအထောက်အထား: တစ်ဦးသည်အသက်-related မျက်နှာစာပြဿနာအဖြစ်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု
စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2018 ဖေဖော်ဝါရီ 12; 81: 157-166 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.02.017 ။
ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (PIU; မဟုတ်ရင်အင်တာနက်ကစွဲလမ်းအဖြစ်လူသိများ) ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးထွားလာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က PIU နှင့်ဆက်စပ်တိကျတဲ့အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ထိုအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများ၏စိစစ်အခန်းကဏ္ဍစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုက်ဘ်ဆိုက်များ, US မှာတဦးတည်းနှင့်တောင်အာဖရိကတွင်တဦးတည်းမှာအင်တာနက်-based စစ်တမ်းများတွင် 1749 အသက်နှင့်အထက်မီဒီယာကြော်ငြာများမှတဆင့် 18 သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း, ကျနော်တို့ကဆန်းစစ်ဘို့ Lasso မှာဆုတ်ယုတ်အသုံးပြုသွားမည်။
, အင်တာနက်ဂိမ်းကစား (β: 2.1), အွန်လိုင်းစျေးဝယ် (β: 0.6), အွန်လိုင်းလေလံပွဲက်ဘ်ဆိုက်များ (β: 1.4) ၏အသုံးပြုမှုကို, လူမှုရေး: တိကျတဲ့အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများယေဘုယျ surfing (0.027 Lasso β) အပါအဝင်ပိုမိုမြင့်မားပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရမှတ်များ, နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ကွန်ယက် (β: 0.46) နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (β: 1.0) ။ PIU နှင့်အခန်းကဏ္ playing - ကစားခြင်းဂိမ်း (β: 0.33)၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်း (β: 0.15)၊ လေလံတင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုခြင်း (β: 0.35) နှင့် streaming media (β: 0.35) အကြားဆက်ဆံရေးသည်ခေတ်အလယ်အလတ်အဆင့်ကျဆင်းသည်။ PIU ၏အဆင့်ဆင့်။ ကျား၊ မနှင့်ကျား၊ မရေးရာအင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများသည်ပြaticနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုရမှတ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအပြီးသတ်သက်သေသာဓကရှိသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါငယ်ရွယ်သင်တန်းသားများကို (အသက်≤ 25, β: 0.35 နှင့် 0.65 အသီးသီး) တွင်မြင့်မားသော PIU ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ယေဘုယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ (GAD) နှင့် obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ခဲ့ကြသည် အဟောင်းပါဝင်သူများ (55 နှင့် 6.4 အသီးသီးβအသက်> 4.3, β) အတွက်မြင့်မားသော PIU ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်။
အွန်လိုင်းအပြုအမူထဲကအတော်များများအမျိုးအစားများ (ဥပမာစျေးဝယ်, ညစ်ညမ်း, ယေဘုယျ surfing) တစ်ဦးမျက်နှာစာရောဂါအဖြစ်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ရောဂါရှာဖွေခွဲခြားထောက်ပံ့ကစားထက်အင်တာနက် maladaptive အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအားကောင်းဆက်ဆံရေးဟာသည်းခံကြ၏။ ထို့အပြင်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိတ်ရောဂါ diagnoses ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, အသက်တွေနဲ့ခြားနားသည်။
အနှစ်ချုပ်, DSM-5 တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရောဂါအဖြစ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါမီးမောင်းထိုးပြပေမယ့်အွန်လိုင်းအပြုအမူ၏အခြားအမျိုးအစားများ (ဥပမာစျေးဝယ်, ညစ်ညမ်း, ယေဘုယျ surfing) မှဂိမ်းထက်အင်တာနက် maladaptive အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအားကောင်းဆက်ဆံရေးဟာသည်းခံကြ၏။ ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ရောဂါ diagnoses နှင့်အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများ, အသက်နှင့်အတူပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့တွေ့ရှိချက်ခြားနားသည်။ ဤရလဒ်သည်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကန့်သတ်အသိပညာအထောက်အကူပြုနှင့်တစ်ဦးမျက်နှာစာရောဂါအဖြစ်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ရောဂါရှာဖွေခွဲခြားဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။
လူငယ်အတွက် Impulse စရိုက်များနှင့်စွဲ-related အပြုအမူတွေ (2018)
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2018 ဧပြီ 12: 1-14 ။ Doi: 10.1556 / 2006.7.2018.22 ။
Rømer Thomsen K သည်1, Callesen ကို MB1, Hess M က1, Kvamme TL1, Pedersen MM1, Pedersen MU1, Voon V ကို2.
Impulse စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်အန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ UPPS-P ကို ​​Impulse မော်ဒယ်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲများနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, ဒါပေမဲ့တခြား Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ-related အပြုအမူတွေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ကျနော်တို့ကဤအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလူငယ်အတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse စရိုက်များနှင့်မျိုးစုံပစ္စည်းဥစ္စာ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ-related အပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့ရှာကြံလျက်နေ၏။
ပါဝင်သူများ (N = ၁၀၉၊ အသက် ၁၆-၂၆ နှစ်၊ ၆၉% အထီး) ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေမှုရရှိစေရန်၎င်းတို့၏ပြternနာများကိုပြင်ပမှဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားစစ်တမ်းမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည် UPPS-P မေးခွန်းလွှာနှင့်ပစ္စည်းများ (အရက်၊ ဆေးခြောက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ) နှင့်ပြsubstancesနာမဟုတ်သောပစ္စည်းများ (အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း၊ Regression ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း impulsivity စရိုက်များနှင့်စွဲ -related အပြုအမူ၏ညွှန်းကိန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ UPPS-P ကိုမော်ဒယ်အပြုသဘောပြဿနာကအင်တာနက်ဂိမ်းကစား မှလွဲ. အားလုံးစွဲ-related အပြုအမူတွေ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအပြည့်အဝညှိမော်ဒယ်များ, အာရုံခံစားမှုရှာကြံနှင့်ဇွဲမရှိခြင်းအရက်၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်မှာတော့အရေးတကြီးဆေးခြောက်၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှင့်ဇွဲမရှိခြင်းဆေးခြောက်ထက်အခြားမူးယစ်ဆေးပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျဇွဲ၏အရေးတကြီးနှင့်မရှိခြင်းမူးရူးစားနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဇွဲမရှိခြင်းညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မျိုးစုံစွဲ-related အပြုအမူတွေကိုဖြတ်ပြီးရို Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေး။ မှာ-အန္တရာယ်လူငယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်စှဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အလားအလာတားဆီးကာကွယ်ရေးကုထုံးပစ်မှတ်အဖြစ်အလားအလာခန့်မှန်းအဖြစ်အရေးတကြီးနှင့်ဇွဲမရှိခြင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
အင်တာနက်ကို (2018) ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုသို့ဥရောပသုတေသနကွန်ယက်ကြေညာစာတမ်း
အောက်တိုဘာလ 2018, ဥရောပ Neuropsychopharmacology
Project မှ: ကုန်ကျစရိတ်လှုပ်ရှားမှုပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများအတွက်ဥရောပကွန်ယက်ကို 16207
အင်တာနက်ကိုကမ္ဘာလုံးတာကိုဖြတ်ပြီးယခု All-နေရာအနှံ့ပါပဲ။ ဒါဟာအပြုသဘောအသုံးပြုမှု (သတင်းအချက်အလက်မှဥပမာ prompt ကို access ကို, လျင်မြန်သောသတင်းဖြန့်ဝေ) ရှိပြီးနေစဉ်တွင်, များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီအင်တာနက်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း (PUI), ထပ်တလဲလဲချို့ယွင်းအပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေးထည့်သွင်းထားတဲ့ထီးသက်တမ်းဖွံ့ဖြိုး။ အင်တာနက်ကိုတစ်ပြွန်အဖွစျဆောငျရှကျနိုငျပွီးမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသည်, function အလွန်အကျွံနှင့် compulsive ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဝယ်, လောင်းကစား, streaming များသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်အပြုအမူတွေ impairing။ ပြည်သူ့နှင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များသည် PUI ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုသက်တမ်းတစ်လျှောက်တိုးပွားစေသည်။ Gaming Disorder သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ခွဲခြားသည့်စနစ်များတွင်ထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားနေပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ICD-11 version တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဦး နှောက်ကိုအခြေခံသည့်ဇီဝဗေဒ၊ လူမှု - စီးပွားရေး - စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရအတည်ပြုထားသောကြားဝင်ခြင်းနှင့်မူဝါဒချဉ်းကပ်ခြင်းများအတွက်သုတေသနများပိုမိုလိုအပ်သည်။ PUI ၏အမျိုးအစားများနှင့်ပုံစံများ၏ပြင်းအားနှင့်သဘောသဘာဝအရအလားအလာရှိသောယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားအသိပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အရ, Horizon 2020 အောက်ရှိအီးယူသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (COST) ၏လေးနှစ်တာအစီအစဉ်သစ် (CA 16207) ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စိတ်တက်ကြွသော၊ compulsive နှင့်စွဲစေသည့်ရောဂါများနယ်ပယ်တစ်ဝိုက်မှသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် Clinician များကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဥရောပတစ်လွှားနှင့် ကျော်လွန်၍ PUI သို့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော interdisciplinary research ကိုတိုးမြှင့်ရန်၊ နောက်ဆုံးတွင်စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများကိုအသိပေးရန်။ ဤစာတမ်းသည် PUI ၏နားလည်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကွန်ယက်မှသတ်မှတ်ထားသောအရေးပါသည့်နှင့်ပြည့်မီနိုင်သောသုတေသန ဦး စားပေးမှုကိုးခုကိုအစောပိုင်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကွန်ယက်သည်ပူးပေါင်းသုတေသနကွန်ယက်များ၊ မျှဝေထားသောနိုင်ငံစုံဒေတာဘေ့စ်များ၊